ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: Warren Buffet နဲ့ စကားပြောခြင်း
ရေးပြီးချိန်: 5/20/2008 10:29:00 PM
21 May 08, 01:58
ap: Gates is now only third richest.
21 May 08, 01:56
ap: Buffet is world's richest in2008, not second.
ခုလိုပြောပြတဲ့ ap ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း သေချာမသိပါဘူး။ ကျွန်မ အဖေပို့လိုက်တြ့ Forward Mail ကနေ ရတာပါ။ ဘာပဲစြဖ်ဖြစ် သူပြောတဲ့ စကားလေးတွေကနေ လူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့ တင်ထားတာပါ။